Indlu ekwicomplex enamagumbi ayi-3 embindini weKošice - I-Airbnb
Indlu ekwicomplex enamagumbi ayi-3 embindini weKošice
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-3, enamagumbi okulala ayi-2 ahlukeneyo, ikwindawo yesibini, eya ngqo kwi-Main Street, eza kuqinisekisa ukuba ulala ngokuzola, ungaphazanyiswa yi-Main Street ephithizelayo, kodwa kwangaxeshanye ikufuphi. Unokuya kwindawo yokuhlala ukusuka kwisikhululo esiphakathi, uhamba ngeenyawo.
Unekhaya elitofotofo, ikhitshi elinento yonke, umatshini wokuhlamba impahla, igumbi lokuhlambela labucala. Kunuka iitawuli, ii-slippers namashiti acocekileyo. Ukuba awufuni ukuya naphi na, ube nekofu neti kwiakhawunti yethu, sikumema.
Uza kufumana izinto zokudlala zabantwana, iimagazini, izikhokelo zesixeko, kunye neshampu nesepha.
Uza kufumana zonke izinto eziphambili esixekweni ezikulindileyo. Indawo yokutyela ekufutshane yiKameli kunye nePrimi kunye neVilla Cassa yewayini.
Thumela umyalezo okanye undifowunele nanini na.